SundaySermons.online: ဘုရားသခင်၌ မိမိအသက်တာကို ကိုယ်တိုင်ဆက် ကပ်အပ်နှံခြင်း
ဘုရားသခင်၌ မိမိအသက်တာကို ကိုယ်တိုင်ဆက် ကပ်အပ်နှံခြင်း
ယခု ဤဝေငှချက်ကို ယာကုတ် ၄း၇-၉ ကျမ်းပိုဒ်ကို အခြေပြုထားပါသည်။ ယာကုတ် ၄း၇-၉ ကိုဖတ်ပါ။
Submit ဟူသော စကားလုံး၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ အရှုံးပေးသည်။ အပ်နှံသည်။ မိမိ၏ အခွင့်အာဏာကို တပါးသူအား ပေးအပ်သည်…စသည်ဖြင့် ကြိယာစကားလုံးတစ်ခုအဖြစ် သိရှိခဲ့ရပါသည်။ ထိုစကားလုံးနှင့် ပတ်သတ်ပြီး သင်မည်ကဲ့သို့ ခံစားပါသနည်း။
ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်က ထိုစကားလုံးမှာ မိခင်နှင့် ဖခင်တို့ကို ရည်ရွယ်ခဲ့သည်ဟု ထင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းနေသည့် အရွယ်သို့ ရောက်သောအခါ ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် ရည်ညွှန်းသည်ဟု ထင်မြင်ခဲ့ ပြန်ပါသည်။ ကျောင်းပြီး၍ လုပ်ငန်းခွင်ထဲသို့ ရောက်သောအခါ အလုပ်ရှင်၊ (သို့) မန်နေဂျာ စသောသူတို့ အတွက်သာ ဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်ခဲ့ပြန် ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဘုရားသခင်ကို သိကျွမ်းလာ ပြီးနောက် အသက်တာကို သခင်ထံသို့ အပ်နှံလိုက်သော အချိန်တွင် ထိုစကားလုံး၏ အဓိပ္ပါယ် အစစ်အမှန်မှာ သခင့် အတွက်သာ ဖြစ်သည်ကို သိခွင့် ရရှိလိုက်ပါသည်။
တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်း၏ လက္ခဏာသက်သေ ဟူသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ထိုမေးခွန်းကို ဖြေကြားမည် ဆိုပါလျှင် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော် အတိုင်း အသက်ရှင် လိုက်လျှောက်ခြင်းသည် တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်း၏ လက္ခဏာ သက်သေ တစ်ပါး ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ အထက်ကျမ်းပိုဒ်ထဲမှ သခင်၊ သခင် ဟုခေါ်နေသောသူများမှာ ကောင်းသော အကျင့်နှင့် ပုံသက်သေ ပြသနိုင်သော သူများဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ် မထင်ပါ။
သူတို့သည် သခင်ကို အနက်ရှိုင်းဆုံး နှလုံးသား တစ်နေရာမှ သိကြွမ်းကြသူများ မဖြစ်နိုင်ပါ။ သူတို့သည် သခင်ကို အပေါ်ယံသာ သိရှိကြသည်။ ထိုသူတို့သည် အမှုတော်ဆောင်များ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ နှုတ်ခပတ်တော် ဟောပြောနေသော အမှုတော်ဆောင်များ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သူတို့သည် မိမိကိုယ် မိမိကျေနပ် စေရန်သာ လုပ်ဆောင်နေသောသူများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ယုံကြည်သူ ပရိတ်သတ်များထံမှ လက်ခုတ်သြဘာ ရရှိရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နေသော သူများလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ထိုသူတို့သည် အံ့သြဘွယ် ကောင်းလောက်အောင် ကြီးမားသော အမှုတော် လုပ်ငန်းကြီးများလည်း ရှိနိုင်ပါ သည်။ သူတို့၏ ကြီးမားကျယ်ပြန့်လှသည့် အမှုတော် လုပ်ငန်းကြီးများကို တစ်နိုင်ငံလုံးက လက်ခုတ်သြဘာ ပေးခဲ့ကြပြီး မယုံကြည် နိုင်လောက်အောင် အလှူငွေများလည်း လက်ခံရရှိခဲ့ကြသည်။ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ပြောပြလိုပါသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု မှတ်သားခဲ့ရပါသည်။ PTL Club ကို တည်ထောင်သူ Jim Bakker အကြောင်းဖြစ်ပါသည်။
Jim Bakker သည် ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ ကာရိုလိုင်းနား ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းတွင် အမှုတော်လုပ်ငန်း တစ်ခုကို အစပျိုး ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် တတိယမြောက် အအောင်မြင်ဆုံးသော အမှုတော် လုပ်ငန်းကြီး ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ အမေရိကန် တစ်နိုင်ငံလုံးကို ဂြိုလ်တု စလောင်ဖြင့် ရုပ်သံ အစီအစဉ်ကို (၂၄) နာရီလုံး ထုပ်လွှင့်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအစီအစဉ်ကို ကြည့်ရှုသူများထံမှ တစ်ပတ်လျှင် ဒေါ်လာ တစ်သန်းခန့် အပတ်စဉ် လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖြင့် အခြားသော မီဒီယာ လုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ခဲ့လေသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Mission Of PTL ကို ထူထောင်ခဲ့ လေသည်။ လူထု မီဒီယာ လုပ်ငန်းဖြင့် အမှုတော် လုပ်ငန်း အောင်မြင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုရပေမည်။ လူထုဟောပြောပွဲကြီးများကို ကဇတ်ရုံကြီးများ၊ အားကစားရုံကြီးများတွင် ပြုလုပ် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ "ယေရှုသာ ဒီကနေ့ အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင် ဟောဒီ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်ကနေ ဟောပြောလိမ့်မယ်" ဟု ဟောပြော ခဲ့လေသည်။
Jim Bakker သည် သူ၏ အမှုတော်လုပ်ငန်းအတွက် အံ့သြစရာ ကောင်းလောက်အောင် ထူးခြားသော နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုပြီး ငွေကြေးများ သုံးစွဲခဲ့လေသည်။ မနာလိုသောသူများ၊ PTL၏ အောင်မြင်မှုကို မရှုစိမ့်နိုင်သူများက PTL ဆိုသည်မှာ Pass The Loot (အဓမ္မ ငွေဖြုန်းတီးသည်) ဟုပင် ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
နောက်ဆုံတွင် Jim Bakker သည် ထောင် (၅)နှစ် ကျသွားခဲ့သည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့ တွင် ပြန်လည် လွှတ်မြောက် လာခဲ့သည်။ သူသည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ကိုယ်တိုင်ရေးသားသော စာအုပ်တစ်အုပ် ထုပ်ဝေ ခဲ့လေသည် ထိုစာအုပ်၏ ခေါင်းစဉ်မှာ I was wrong. (ကျွန်တော်မှားခဲ့တယ်။) ဟူ၍ ဖြစ်ပြီး သူမှားယွင်းခဲ့သမျှ ကို ထိုစာအုပ်ထဲတွင် ဖွင့်ချ ရေးသားခဲ့သည်ဟု ကြားသိခွင့် ရခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်လည်း Jim Bakker ကဲ့သို့ အမှားမလုပ်ခင် မိမိတို့ကိုယ် မိမိတို့ သခင့်ထံ ဆက်ကပ်ဘို့ အပ်နှံဘို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
1. ကျွန်တော်တို့သည် တွန်းလှန်ခြင်းအားဖြင့် အပ်နှံရမည်။
2. ကျွန်တော်တို့သည် ရွှေ့ပြောင်းခြင်းအားဖြင့် အပ်နှံရမည်။
3. ကျွန်တော်တို့သည် ၀မ်းနည်းမှုများ ခံစား၍ အပ်နှံရမည်။
ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်သို့ လိုက်ကြလော့။ မာရ်နတ်ကို ဆီးတာကြလော့။ သို့ပြုလျှင် သူသည် သင်တို့ထံက ပြေးသွား လိမ့်မည်။ (ယာကုတ် ၄း၇)
ကျွန်တော်တို့အတွက် အပေါင်းအဖော်ဆိုသည်မှာ အလွန် အရေးကြီးပါသည်။ အမှုအရေးတစ်ခု ရင်ဆိုင်ရမည်။ ပြဿနာ တစ်ခုကို ဖြေရှင်းရမည် ဆိုပါက ပိုမို၍ပင် အရေးကြီးသည်မဟုတ်ပါလား။ တစ်ခါတစ်ရံ ထိုပြဿနာ အတွက် မည်သို့ လုပ်ဆောင်ရမည်၊ မည်သို့ ပြောဆိုရမည်ကို ကိုယ်တိုင်မသိသောအချိန်အခါတွေ အများအပြား ရှိနေတတ်ပါသည်။ ထိုအချိန်များအတွက် အသိအကျွမ်းများသည် အလွန်အရေးပါလာသည်။ အရာခပ်သိမ်းကို ကျွမ်းကျင်စွာ ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည့်သူတစ်ဦး ကျွန်တော်တို့အတွက် လိုအပ်ပါသည်။
သို့သော်လည်း ထိုအမှုအရာအတွက် ကျွန်တော်တို့ကို ရင်းနှီးပြီးဖြစ်သူတစ်ဦးသည် ကျွန်တော်တို့က မဖိတ်ခေါ်သော်လည်း အတူနေခြင်သည်ဟု ဆိုကာ အတင်းအဓမ္မ ဝင်ရောက်လာသူ တစ်ဦးရှိပါသည်။ ထိုသူမှာ စာတန်ပင်ဖြစ်သည်။ မဖိတ်ခေါ်ဘဲနှင့် ကျွန်တော်တို့ အသက်တာထဲသို့ အတင်းဝင်ရောက်ကာ နေရာယူ စိုးမိုးလေ့ရှိပါသည်။
"ကြွင်းသော စကားဟူမူကား ညီအကိုတို့၊ သခင် ဘုရားအားဖြင့်၎င်း၊ တန်ခိုးတော် အရှိန်အားဖြင့်၎င်းကောင်း၊ ခိုင်ခန့်ခြင်း ရှိကြလော့။ မာရ်နတ်၏ ပရိယာယ်တို့ကို တာဆီးနိုင်မည်အကြောင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ပြင်ဆင်တော်မူသော လက်နက်စုံကို ဝတ်ဆောင်ကြလော့။ အကြောင်းမူကား ငါတို့သည် မိုဃ်ကောင်းကင်၌နေသော နတ်ဆိုးတို့နှင့်၎င်း ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြ၏။" (ဧဖက် ၆း၁၀-၁၂)
ဘုရားသခင်၌ ချဉ်းကပ်ကြလော့။ သို့ပြုလျှင်၊ သင်တို့၌ ချဉ်းကပ်တော်မူလိမ့်မည်။ (ယာကုတ် ၄း၈)
တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကို မည်သူကမျှ လက်ခံ နှစ်သက်ခြင်း မရှိကြပေ။ ရွှေပြောင်းသည် ဆိုရာတွင် ဆုံးရှုံးမှုများ ရှိသည်။ နာကျင်မှုများ ရှိသည်။ အလွန်အလုပ်များသည်။ ကျွန်တော်တို့ ရှိနေသည့် နေရာမှ ဘုရားသခင်ထံသို့ ရွှေ့ရာတွင်လည်း တစ်စုံတစ်ရာ အဖိုးအခများ ပေးဆပ်ရသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုအလုပ်ကို မည်သူကမျှ လုပ်ဆောင်လိုခြင်း မရှိကြချေ။ အချို့သော သူတို့သည် မိမိတို့ ရှိနေသည့် အပြစ်နွံ ထဲတွင် ပျော်ရွှင်နေကြပြီး ထိုနေရာမှ ရွှေ့ပြောင်းလိုခြင်း မရှိကြချေ။ နောင်တရသောသူ၊ ခရစ်တော်ထံ လှည့်လာသော သူများကိုပင်လျှင် ထိုသူတို့က အပြစ်တင် ပြောဆိုနေကြသည်။ တစ်နေ့သော အခါ ထိုသူတို့သည် နှုတ်ခပတ်တော် ဧဝံဂေလိ တရားတော်ကို ကြားနာခဲ့ပါလျှင် ထိုအခြေအနေမှ တွန်းလှန် ရုန်းထွက်လာ လိမ့်မည် ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
တစ်ခါက တရားဟောဆရာ တစ်ဦးသည် ကျမ်းစာထဲတွင် ဖော်ပြထားသော အပြစ်များကို အမျိုးအစားခွဲခြားပြီး (၇၂၆) မျိုး ရှိကြောင်း ရှင်းလင်ကာ ဟောပြော သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။ မကြာမီ လူအများအပြားထံမှ စာပေါင်း မြောက်များစွာ ရရှိခဲ့ပြီး ထိုအပြစ်ထဲတွင် သူတို့ အမှန်တကယ် ကျရောက်နေကြောင်း ဝန်ခံထားသော စာများ ရောက်လာခဲ့သည်။ သို့သော် အချို့သောသူများက လက်မခံချင်ကြဘဲ ထိုတရားကို ဟောပြောသော ဆရာကြီး ကိုပင် လှောင်ပြောင် ကဲ့ရဲ့ ခဲ့ကြလေသည်။ ထိုသူတို့သည် သူတို့ ရှိသောနေရာတွင် မွေ့လျှော်နေကြပြီး မပြောင်း ရွှေ့ချင်သောသူများ ဖြစ်ကြသည်။
အချို့သောသူများမှာမူကား သူတို့ထံသို့ ဘုရားသခင်ကို လာစေချင်သည်။ သူတို့ကမူ ဘုရားသခင်ထံ သွားဘို့ မကျိုးစားကြချေ။ ထိုသူတို့က "ငါတို့ ဘုရားကျောင်းကို သွားချင်တဲ့ စိတ်ရှိရင် သွားမယ်။ ကျမ်းစာ ဖတ်ချင်တဲ့ စိတ်ရှိရင် ဖတ်မယ်။ ဖတ်ချင်တဲ့ စိတ်မရှိရင်တော့ မတတ်နိုင်ဘူး။ ဘုရားသခင် ငွေကြေး ပြင်ဆင်ပေးရင်တော့ ဘုရားကျောင်းကို သွားမယ်။ သို့မဟုတ် တစ်ခါ တစ်ရံ သွားရောက်ခြင်းကပင်လျှင် လုံလောက်နေပြီဟု ခံစားနေကြ သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အကူအညီလိုရင် ဘုရားကျောင်းကိုသွားမယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် သွားစရာ မလိုဘူး လို့ ထင်နေတတ်ကြပါသည်။
လူတိုင်း လျှောက်လှမ်းနေသော ဘဝအသက်ရှင်မှုထဲတွင် ပြဿနာများ ရှိနေတတ်ကြသည်။ ပြဿ ရှိနေခြင်းကပင်လျှင် ဘဝဖြစ်နေသည်။ Frank Sinatra က ပြောခဲ့ဘူးသည်မှာ ကျွန်တော် လျှောက်လှမ်းဘို့ လမ်းတွေကို ကျွန်တော်အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အဲဒီအထဲမှာ ပြဿနာတွေ အမြဲဘဲ ရှိနေခဲ့တယ်" ဟူ၍ ပြောခဲ့ဘူးပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ရှိသော နေရာမှ ဘုရားသခင်ထံ အရောက်သွားဘို့ လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်ထံ ရွှေ့လျားမှသာ ဘုရားသခင်၏ ငြိမ်းသက်ခြင်းကို ခံစားပြီး ဘုရားသခင်ထံ ဆက်ကပ်သော အသက်တာဖြင့် အသက်ရှင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
"ဝန်လေး၍ ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့ ငါ့ထံသို့ လာကြလော့။ ငါသည် ချမ်းသာပေးမည်။ ငါ့ထမ်းဘိုးကို တင်၍ ထမ်းကြလော့။ ငါ့ထံ၌ နည်းခံကြလော့။ ငါသည် နူးညံ့ သိမ်မွေ့သော သဘောရှိ၏။ သင်တို့ စိတ်နှလုံးသည် သက်သာခြင်းကို ရလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား ငါ့ထမ်းဘိုးသည် ထမ်းလွယ်၏။ ငါ့ဝန်လည်း ပေါ့၏ ဟုမိန့်တော်မူ၏။"(မဿဲ ၁၁း၂၈-၃၀)
ကျွန်တော်တို့သည် အပြစ်နှင့် ပြည့်နေသော နေရာမှ ဘုရားသခင်ထံ ရွှေ့လျားဘို့ လိုအပ်ပါသည်။ ကိုယ့်ဆန္ဒ၏ အစေခံဘဝမှ ခရစ်တော်၏ အစေခံဘဝသို့ ရွှေ့လျားရပါမည်။ ထိုသို့ ရွှေ့လျားပါက အရှင်မြတ်သည် ကျွန်တော်တို့ထံ ရောက်ရှိလာမည်။ ထို့ထက်မက ကျွန်တော်တို့ အထဲတွင် အမြဲ ကိန်းဝပ် နေမည် ဖြစ်ပါသည်။
အပြစ်ရှိသာသူတို့ သင်တို့လက်ကို စင်ကြယ်စေကြလော့။ စိတ်နှခွ ရှိသောသူတို့ သင်တို့ စိတ်နှလုံးကို သန့်ရှင်းစေကြလော့။ ဆင်းရဲ ငြိုငြင်ခြင်း၊ စိတ်မသာညည်းတွားခြင်း၊ ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်း၊ ရှိကြလော့။ သင်တို့ ရယ်ခြင်းကို စိတ်မသာ ညည်းတွားခြင်း၊ ဖြစ်စေကြလော့။ ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုလည်း ဝမ်းနည်းခြင်း ဖြစ်စေကြလော့။(ယာကုတ် ၄း၈-၉)
အထက်ကျမ်းပိုဒ်တွင် လက်ဆေးပါဟု ဆိုထားပါသည်။ သင်သည် လက်ဆေးတတ်သော အကျင့် ရှိကောင်း ရှိပေလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်လည်း သန့်ရှင်းခြင်းကို ကြိုက်ပါသည်။ မကြာခဏ လက်ဆေးပါသည်။ သို့သော် ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ပြောသကဲ့သို့ လက်ဆေးခြင်းတော့ မဟုတ်ပါ။ ရှင်ယာကုတ်ပြောသော လက်ဆေးခြင်းမှာ အခြားနည်းလမ်း တခု ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်တို့ အပြစ်ရှိသောအခါ ပြန်လည် သန့်ရှင်းဘို့ လိုအပ်ပါသည်။ သန့်ရှင်းခြင်းကို ရရှိနိုင်သည့် နေရာ တစ်နေရာသာ ရှိပါသည်။
"ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား လာကြ တရားစီရင်ကြကုန်အံ့။ သင်တို့ အပြစ်သည် နီသော အဆင်းရှိသော်လည်း မိုဃ်ပွင့်ကဲ့သို့ ဖြူလိမ့်မည်။ ကတ္တီပါနှင့် အမျှ နီသော်လည်း သိုးမွေးကဲ့သို့ ဖြစ်လိမ့်မည်။" (ဟေရှာယ ၁း၁၈)
Marvin Vincent က ရေးသားခဲ့သည်မှာ "နောင်တရသည် ဆိုသည်မှာ မျက်ရည်ကျရုံ၊ ဝမ်းနည်းရုံသာ မဟုတ်ပါ။ နောင်တရခြင်း ဆိုသည်မှာ ဝမ်းနည်းခြင်းမှ လုပ်ဆောင်ခြင်းသို့ ပြောင်းလဲ ခြင်းဖြစ်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော အသက်တာသို့ ဆီသို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
"သင်တို့၏ အပြစ်ကို လွတ်စေခြင်းငှါ နောင်တရ၍ တစ်ယောက်မျှ မကြွင်း ယေရှုခရစ်၏ နာမ၌ ဗတ္တိဇံကို ခံကြလော့။ သို့ပြုလျှင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် တည်းဟူသော ဆုကျေးဇူးတော်ကို ခံရကြလိမ့်မည်။" (တမန်တော် ၂း၃၈)
နောင်တရ၍ နှစ်ခြင်းခံခြင်းသည် ခရစ်တော်က ကျွန်တော်တို့ အသက်တာကို သန့်ရှင်ခြင်း ပြုလုပ်ပေးသည့် အစီအစဉ်တစ်ခုကို လက်ခံသော လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။
ဆင်းရဲ ငြိုငြင်ခြင်း၊ စိတ်မသာညည်းတွားခြင်း၊ ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်း၊ ဆိုရာတွင် ခရစ်တော်ထံ ရောက်ရှိလာသူ တိုင်းက အမှန်တကယ်တွင် အပြစ်အတွက် ငိုကြွေးပြီး ရောက်လာသူများ မဟုတ်ကြပါ။ သို့သော် မိမိတွင် အပြစ်ရှိသည်ကို အမှန်တကယ် သိရှိပြီဆိုပါက အမှန်တကယ် ဝမ်းနည်းသင့်သည်။ ကြေကွဲသင့်သည်။ ငိုကြွေး သင့်သည်။ ထိုသို့ အပြစ်အတွက် အမှန်တကယ် ဝမ်းနည်းကြေကွဲတတ်မှသာ ကယ်တင်ခြင်း ရလိမ့်မည်။
ယနေ့တွင် ကမ္ဘာမည်သည့် နေရာမဆို အပြစ်ပြုလုပ်ရခြင်းကို ပျော်စရာ၊ တစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်ကာ ပြုလုပ်နေကြ ကြောင်း တွေ့မြင်နေရသည်။ ဘုရားသခင်ကို အမှန်တကယ် ဆက်ကပ်လိုသူသည် အပြစ်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ကြေကွဲတတ်သောသူ ဖြစ်သည်။
မတရားသော မေထုန်၌ မှီဝဲခြင်း၊ အမျိုးမျိုးသော ကိလေသာ ညစ်ညူခြင်း၊ လောဘ လွန်ကျူးခြင်း၊ အမှုတို့ကို သန့်ရှင်းသူတို့သည် ရှောင်သင့်သည့်အတိုင်း စကားဖြင့်မျှ မဆက်ဆံကြနှင့်။ မတော်မလျော်သော ညစ်ညူး ပြက်ပြယ်သော စကားများကိုလည်း ပယ်၍ ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းခြင်း၊ စကားကို သုံကြလော့။ (ဧဖက် ၅း၃-၄)
သင်ကိုယ်တိုင် နှိမ့်ချကာ ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်သို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ။ ထိုအရာသည် မဖြစ်မနေ အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ မာနကြီးသောသူများ ကယ်တင်ခြင်းရဘို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။
"ကျမ်းစာထဲတွင် ပျောက်သောသား အဖြစ်အပျက်ထဲမှ သားငယ်၏ အခြေအနေမျိုးကို မည်သူမျှ ကြိုက်မည်မဟုတ်ပါ။ ဝက်စာကိုပင်လျှင် မစားနိုင်သော အခြေအနေမျိုးကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သို့သော် တစ်ခါ တစ်ရံ ကျွန်တော်တို့သည် သန့်ရှင်းသော အသက်တာမျိုးကို ရရှိရန် ဘုရားသခင်ရှေ့၊ ခရစ်တော်ရှေ့တွင် နှိမ့်ချဘို့ လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံသာ လုပ်ရမည့် အရာမဟုတ်ဘဲ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းအဖြစ် သတ်မှတ် အသက်ရှင်ရမည်ဖြစ်သည်။
D.L Moody က ပြောခဲ့သည်မှာ "ဘုရားသခင်၏ ကြီးမားသော အသုံးတော်ခံ ဖြစ်စေပါ။ ဘယ်တော့မှ သေးငယ်သော အသုံးတော်ခံ မဖြစ်ပါစေနဲ့။ မိမိအသက်တာ၌ အပြစ်တရားထဲတွင် သေးငယ်သောသူ ဖြစ်သည်ဟု မိမိကိုယ်ကို အသိအမှတ် မပြုနိုင်သရွေ့ ဘုရားသခင်က အသုံးမပြုပါ" ဟူ၍ ပြောဆိုခဲ့ဘူးပါသည်။
အမှုတော်ဆောင်ကြီးတဦးကမူ "ငါဟာ ဘုရားသခင်အတွက် ဖြစ်တယ်။" "ငါဟာ ဘုရားသခင်အတွက် ဖြစ်တယ်။" ဟူ၍ မကြာခဏ ကြွေးကြော်ပေးပါ ဟု ပြောဘူးပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်တို့ အားလုံးတို့ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။"ငါဟာ ဘုရားသခင်အတွက် ဖြစ်တယ်" ဟု ကြွေးကြော်၍ မိမိအသက်တာကို ဘုရားသခင်ထံတွင် ဆက်ကပ်ပါ။
ရေးသားတင်ပြသူ Unknown at 7:50 PM